Lamisil Cream (လာမီဆေးလ်ခရင်မ်) - Hello Sayarwon
Lamisil Cream (လာမီဆေးလ်ခရင်မ်)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Lamisil Cream (လာမီဆေးလ်ခရင်မ်)
Lamisil Cream (လာမီဆေးလ်ခရင်မ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Lamisil Cream (လာမီဆေးလ်ခရင်မ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Lamisil AT cream (terbinafine) ကို မည့်သည့်အကြောင်းအရာများ အတွက် အသုံးပြုကြပါသလဲ။
Lamisil AT ခရင်မ် ဟာ မှိုများကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့ လိမ်းဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးဟာ နူးညံ့တဲ့ မှိုများကို သေစေနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ Lamisil AT ခရင်မ် ကို ခန္ဓါကိုယ်၊ ပေါင်ခြံ၊ ခြေထောက်မှာ ဖြစ်သော ပွေးယားနာများ နှင့် အခြားသော အရေပြားပေါ် မှိုရောဂါများကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ယားယံခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်းတို့ကို သက်သာစေဖို့အတွက် အများဆုံး အသုံးပြုပါတယ်။
Lamisil AT cream (terbinafine) ကို ဘယ်လိုအသုံးပြု သင့်ပါသလဲ။
Lamisil AT ခရင်မ် ကို သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသည့် အတိုင်း အသုံးပြုပါ။ အသုံးပြုရမည့် ဆေးအချိုးအစား တိကျသေချာစေဖို့အတွက် ဆေးညွှန်းကို သေချာစွာ ဖတ်ပါ။
မှိုရောဂါစွဲကပ်နေတဲ့ နေရာကို ရေနှင့် ဆပ်ပြာတို့နှင့် စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောပါ။ Lamisil AT ခရင်မ် လိမ်းမည့်နေရာကို စင်ကြယ်စွာဆေးပြီးလျှင် အခြောက်ခံထားပါ။ သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း (သို့) ဆေးညွှန်းအတိုင်း ဆေးလိမ်းပြီး ညင်သာစွာ ပွတ်ပေးပါ။
အကယ်လို့ Lamisil AT ခရင်မ်ကို ခြေပွေး အတွက် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ခြေချောင်းကြားနေရာများကို သေချာစွာ လိမ်းပါ။
မိမိနှင့် တော်ပြီး လေဝင်လေထွက် ကောင်းသော ဖိနပ်ကို စီးပါ။ တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် ဖိနပ်နှင့် ခြေစွပ်ကို လဲပါ။
အကယ်လို့ သင့်လက်များမှာ မှိုစွဲခြင်း မရှိခဲ့လျှင် Lamisil AT ခရင်မ် ကို အသုံးပြုပြီးတိုင်း လက်ကို စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောပါ။
မှိုစွဲခြင်းကို အလုံးစုံပျောက်ကင်းရန် အတွက် Lamisil AT ခရင်မ် ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည့် အတိုင်း အချိန်မှန်မှန် နှင့် ရက်ပြည့်အောင် လိမ်းပါ။ ရက်အနည်းငယ်ကြာ ဆေးလိမ်းနေစဉ် သက်သာပျောက်ကင်းနေသော်လည်း ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက် မပါပဲ ဆေးရပ်နားခြင်း မပြုရပါ။
Lamisil AT ခရင်မ် အသုံးပြုပုံ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆက်လက်သိရှိလိုသည်များကို သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနှင့် မေးမြန်းဆွေးနွေးပါ။
Lamisil AT cream (terbinafine) ကို ဘယ်လိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်း ထားသင့်ပါသလဲ။
Lamisil AT ခရင်မ် ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည် မထိုးအောင် နဲ့စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံး သိုလှောင် သိမ်းဆည်းတဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းမှုတွေ မဖြစ်အောင်လို့ Lamisil AT ခရင်မ် ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာ သိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေ မပြုလုပ်ပါနှင့်။ Lamisil AT ခရင်မ် ဆေးအမျိုးအစားနဲ့ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှု ပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံ ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေ အကုန်လုံးကို ကလေးတွေ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာ ထားပါ။
Lamisil AT ခရင်မ် ကို အိမ်သာထဲပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်ကနေ ဆေးကို ပစ်ချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကို မလိုအပ်တော့တဲ့ အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ ဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ် ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင်ရဲ့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Lamisil AT cream (terbinafine) ကို အသုံးမပြုခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
Lamisil AT ခရင်မ် ကို မသောက်သုံးခင်မှာ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များရှိရင် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန်ကို ပြောပြထားပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း (သို့) ကလေးနို့တိုက်ခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် (သို့) ကလေးနို့တိုက်နေချိန် များတွင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ဆေးများကိုသာ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မရှိပဲ သောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးများ ဥပမာ သဘာဝ ဆေးဖက်ဝင် ပစ္စည်းများနဲ့ ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးများ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။
Lamisil AT ခရင်မ် ၏ ပါဝင်ပစ္စည်းများ (သို့) အခြားသောဆေးဝါး များနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
အခြားသော ရောဂါများ ရှိခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များ မရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် (B) ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
Lamisil AT cream (terbinafine) က ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်သလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ရင် ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ချင်းပြသပါ။
ခံတွင်း၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း (သို့) လျှာ ရောင်ရမ်းခြင်း
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက လူတိုင်းတွင် မဖြစ်ပါ။ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် အခြားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိပါက သင်ရဲ့ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက Lamisil AT ® cream (terbinafine)နဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ။
Lamisil AT ခရင်မ် ဟာ သင်အခု လောလောဆယ်ဆယ် သောက်သုံးနေတဲ့ တခြားသောဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေ အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားပဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင် ပစ္စည်းတွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေ မပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက Lamisil AT cream (terbinafine)နဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Lamisil AT ခရင်မ် က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင် ဆေးမသောက်မီကတည်းက အစားအသောက် (သို့) အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေ ရှိမရှိကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် (သို့) ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဘယ်လို ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက Lamisil AT cream (terbinafine)နဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေ ရှိသလဲ။
Lamisil AT ခရင်မ် ဟာ သင့်ရဲ့နဂို ကျန်းမာရေး အခြေအနေများနဲ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ လတ်တလောဖြစ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ အကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Lamisil AT cream (terbinafine) ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
အလုံပိတ်ထားသည်ကို ဖွင့်ရန်အတွက် ဆေးတောင့်ရဲ့ အဖုံးကို အသုံးပြုပြီး ဖွင့်ပါ။
မှိုရောဂါစွဲကပ်နေတဲ့ နေရာကို ရေနှင့် ဆပ်ပြာတို့နှင့် စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောပါ။ Lamisil AT ခရင်မ် လိမ်းမည့်နေရာကို စင်ကြယ်စွာဆေးပြီးလျှင် အခြောက်ခံထားပါ။ ခြေပွေး ယားနာခြင်းများ အတွက် မိမိနှင့် တော်ပြီး လေဝင်လေထွက် ကောင်းသော ဖိနပ်ကို စီးပါ။ တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် ဖိနပ်နှင့် ခြေစွပ်ကို လဲပါ။
ခြေချောင်းများကြားကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း (သို့) တစ်နေ့လျှင် နှစ်ကြိမ် (နံနက်နှင့်ည) တစ်ပတ်တိတိ လိမ်းပါ။
ခြေဖဝါး နှင့် ဘေးသားများကို ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း (သို့) တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် (နံနက်နှင့်ည) နှစ်ပတ်တိတိ လိမ်းပါ။
ပွေးရောဂါ အတွက် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း (သို့) တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် (နံနက် သို့မဟုတ် ည) တစ်ပတ်တိတိ လိမ်းပါ။
ဆေးလိမ်းပြီးသည့်အခါတိုင်း လက်ကို စင်ကြယ်စွာ ဆေးကြောပါ။
ကလေးငယ်တွေမှာ Lamisil AT cream (terbinafine) ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် ကလေးများအတွက် အထက်ပါအရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် အသုံးပြုသော ပုံစံနှင့် ဆေးညွှန်းအတိုင်း အသုံးပြုပါ။
Lamisil AT cream ကို ဘယ်လိုပုံစံအချိုးအစားတွေနဲ့ ရရှိနိုင်သလဲ။
Lamisil AT ခရင်မ် ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံ အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Terbinafine hydrochloride ခရင်မ် 1% – မှိုသတ်ဆေး ၃၀ ဂရမ်
Lamisil AT ခရင်မ် ကို အသုံးပြုဖို့လွတ်သွားခဲ့ရင် (မေ့သွားခဲ့ရင်) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးလိမ်းပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် လိမ်းရမယ့် အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ လိမ်းလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးအသုံးပြုတာမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။
Lamisil AT ®. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=a9f8dfc5-8891-43bd-8fd9-9c61d78f2e64. Accessed Feb 18, 2017
Terbinafine cream. https://www.drugs.com/cdi/terbinafine-cream.html. Accessed Feb 18, 2017.